healthcare-disclose.com အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ - စာမျက်နှာများ 2022
healthcare-disclose.com အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ
မှာ healthcare-disclose.com, မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ healthcare-disclose.comကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဦးစားပေးများထဲမှတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်သည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒစာတမ်းတွင် စုဆောင်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အချက်အလက်အမျိုးအစားများပါရှိသည်။ healthcare-disclose.com အဲဒါကို ဘယ်လိုသုံးလဲ။
သင့်တွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့မျှဝေပြီး/သို့မဟုတ် စုဆောင်းရယူထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ healthcare-disclose.com.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ဤဥပဒေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သဘောတူပြီး ၎င်း၏စည်းမျဉ်းများကို သဘောတူပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်
သင့်အား ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းကို ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုရသည့် အကြောင်းရင်းများသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုသည့်အချိန်၌ သင့်အား ရှင်းလင်းစွာ ရှင်းလင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါက၊ သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ သင်ပေးပို့နိုင်သည့် မက်ဆေ့ချ်နှင့်/သို့မဟုတ် ပူးတွဲပါအကြောင်းအရာများနှင့် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် အခြားအချက်အလက်များကဲ့သို့သော သင့်အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင့်တစ်ခုအတွက် စာရင်းသွင်းသည့်အခါ၊ အမည်၊ ကုမ္ပဏီအမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့သော အရာများအပါအဝင် သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုသည်-
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို တိုးတက်အောင်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး ချဲ့ထွင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုပုံကို နားလည်ပြီး ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ဖန်တီးပါ။
သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သော အပ်ဒိတ်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ပရိုမိုးရှင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးမှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်အား အီးမေးလ်များ ပေးပို့ပါ။
လိမ်လည်မှုကို ရှာဖွေပြီး တားဆီးပါ။
healthcare-disclose.com မှတ်တမ်းဖိုင်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လိုက်နာသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ကြည့်သောအခါတွင် ဤဖိုင်များသည် ဧည့်သည်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ hosting ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး hosting ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းဖိုင်များမှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များတွင် အင်တာနက် ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာများ၊ ဘရောက်ဆာ အမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP)၊ ရက်စွဲနှင့် အချိန်တံဆိပ်ခေါင်း၊ ရည်ညွှန်းခြင်း/ထွက်သည့် စာမျက်နှာများနှင့် ကလစ်အရေအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော မည်သည့်အချက်အလက်နှင့်မျှ ချိတ်ဆက်မထားပါ။ အချက်အလက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဆိုက်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ သုံးစွဲသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာခံခြင်းနှင့် လူဦးရေစာရင်း အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းတို့အတွက် ဖြစ်သည်။
တခြား website တွေလိုပဲ၊ healthcare-disclose.com 'ကွတ်ကီး' ကို အသုံးပြု. ဤ cookies များကို ဧည့်သည်များ၏ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ စာမျက်နှာများ အပါအဝင် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဧည့်သည်များ၏ဘရောက်ဆာအမျိုးအစားနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် အချက်အလက်ကို အသုံးပြုပါသည်။
Google သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site ရှိ ပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် healthcare-disclose.com နှင့် အင်တာနက်ရှိ အခြားဆိုက်များသို့ ၎င်းတို့၏လာရောက်လည်ပတ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်လာရောက်သူများထံ ကြော်ငြာများပြသရန်အတွက် DART cookies ဟုလူသိများသော cookies များကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။ သို့သော်၊ လာရောက်သူများသည် အောက်ပါ URL တွင် Google ကြော်ငြာနှင့် အကြောင်းအရာကွန်ရက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် DART ကွက်ကီးများအသုံးပြုမှုကို ငြင်းပယ်ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည် - https://policies.google.com/technologies/ads
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်ရှိ ကြော်ငြာသူအချို့သည် cookies နှင့် web beacons ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးစီတွင် သုံးစွဲသူဒေတာဆိုင်ရာ မူဝါဒများအတွက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒရှိသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများသို့ ဟိုက်ပါလင့်ခ်ချိတ်ထားပါသည်။
ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ
ကြော်ငြာမိတ်ဖက်တစ်ဦးစီအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ရှာဖွေရန် ဤစာရင်းကို တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ healthcare-disclose.com.
မှတ်ရန် healthcare-disclose.com ပြင်ပကုမ္ပဏီ ကြော်ငြာရှင်များက အသုံးပြုသည့် ဤ cookies များကို အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခွင့် မရှိပါ။
Third Party ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ
healthcare-disclose.com ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် အခြားသော ကြော်ငြာရှင်များ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ဤပြင်ပကုမ္ပဏီကြော်ငြာဆာဗာများ၏ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အချို့သောရွေးချယ်မှုများမှ မည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်အကြောင်း ၎င်းတို့၏အလေ့အကျင့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။
သင်၏ဘရောက်ဆာတစ်ခုချင်းစီရွေးချယ်မှုများမှတဆင့် cookies များကိုပိတ်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဝဘ်ဘရောက်ဆာများဖြင့် ကွက်ကီးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိရန်၊ ၎င်းကို ဘရောက်ဆာများ၏ သက်ဆိုင်ရာဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
CCPA ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများ (ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မရောင်းပါနှင့်)
CCPA အောက်တွင်၊ အခြားသောအခွင့်အရေးများထဲတွင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူများသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်-
စားသုံးသူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် စားသုံးသူများအကြောင်း စုဆောင်းထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အမျိုးအစားများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ သီးခြားအပိုင်းများကို ထုတ်ဖော်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုက လုပ်ငန်းတစ်ခုက စုဆောင်းထားတဲ့ စားသုံးသူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်မှန်သမျှကို ဖျက်ခိုင်းပါ။
စားသုံးသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် စားသုံးသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို မရောင်းချရန် တောင်းဆိုပါ။
သင်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါက သင့်အားတုံ့ပြန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တစ်လရှိသည်။ ဤအခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်ဒေတာကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးအားလုံးကို သင်အပြည့်အဝသိရှိကြောင်း သေချာစေလိုပါသည်။ အသုံးပြုသူတိုင်းသည် အောက်ပါတို့ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့် – သင့်တွင် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ မိတ္တူများကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် သင့်အား အခကြေးငွေ အနည်းငယ်ကောက်ခံပါမည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် – သင့်တွင် မမှန်ကန်ဟု ယုံကြည်သည့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်မပြည့်စုံဟုယူဆသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်သွင်းရန် သင့်တွင် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဖျက်ပိုင်ခွင့် - အချို့သောအခြေအနေများတွင် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့် - အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကန့်သတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့် - အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သင်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဒေတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုအခွင့်အရေး - အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာကို အခြားအဖွဲ့အစည်းထံ သို့မဟုတ် သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးမှု၏ အခြားအပိုင်းမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေစဉ် ကလေးများအတွက် အကာအကွယ်များ ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိဘများနှင့် အုပ်ထိန်းသူများကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ ပါဝင်ရန်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
healthcare-disclose.com အသက် 13 နှစ်အောက် ကလေးများထံမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သိလျက်ဖြင့် စုဆောင်းထားခြင်း မရှိပါ။ သင့်ကလေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဤကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်ဟု သင်ထင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား အလေးအနက် တိုက်တွန်းထားပြီး ယင်းကို အမြန်ဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းများမှအချက်အလက်များ။